Como Colocar Negrito E Italico No Whatsapp, How To Put Italico On Whatsapp
Ahoana ny fametrahana italico amin"ny whatsapp
Ho hitanao ato amin"ity lahatsoratra ity izanyAhoana ny fametrahana italico amin"ny whatsapp, ao amin"ny torolàlana feno.
Você está assistindo: Como colocar negrito e italico no whatsapp
Fantatrao ve fa azonao atao manokana ny hafatra momba ny WhatsApp? Ity fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo ity dia ahafahantsika manova sy manampy ny fanoratana sy ny typografia an"ireo litera ampiasainay ao anaty hafatra.
Manontany tena ve ianao ny amin"ny fomba sahy, manisy sora-mandry, mivoaka na manoritra ireo hafatra WhatsApp? Raha eny data tonga amin"ny toerana mety ianao!
Ny iray amin"ireo fanatsarana izay nampiana tao amin"ny WhatsApp ary tian"izy ireo indrindra dia ny mety hamolavolana ny lahatsoratra. Ny fametrahana ny soratra amin"ny sora-matevina na sora-mandry amin"ny Whatsapp encontro tena mora sy tsotra, azo tsipikaina na hivoahana koa. Isaky ny manana fidirana amin"ny fitaovana maro ny mpampiasa izay tsy isalasalana fa manome it is in antsika ary mahafinaritra koa.
Voamarikao ve fa ny olona sasany aos amin"ny lisitry ny fifandraisana dia mandefa hafatra amin"ny WhatsApp amin"ny alàlan"ny sora-matevina, sora-mandry, strikethrough ary manova ny endritsoratra amin"ny endritsoratra hafa aza? dare hahafantatra ny fomba hanaovana azy ve ianao?
Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity raha te hahalala Ahoana ny fametrahana italico amin"ny whatsapp.
Manoratra amin"nyItaliana,tsy maintsy ataonao eo anelanelanyvoatsipika(_) ny teny na andianteny tianao homena amin"ity endrika ity:
Fomba iray hanamboarana manokana ny hafatrao ny fampiasana baiko sasany. Azonao atao izany amin"ny teny iray na lahatsoratra lava kokoa. Apetraho eo alohan"ireto sy eo amin"ny faran"ny lahatsoratra tianao havaozina ireto tarehin-tsoratra manaraka ireto:
Negrito: asterisk (*). Ohatra: * lahatsoratra *Italic: voatsipika (_). Ohatra: _text_strikethrough: tilde (~). Ohatra: ~ soratra ~
Tamin"ny voalohany dia tsy ho hitanao ny fanovana natao mivantana tao amin"ny bara-tsoratra, rehefa mandefa azy ianao vao hahita raha nampiharina ilay fomba na tsia.
Toy ny resadresaka data azonao atao koa ny mampiditra fomba tsy sahy, italiana, strikethrough na monospace amin"ilay lahatsoratra ampiasainao amin"ny satanao.
Ver mais: Como Fazer Conversão A Direita E Esquerda E, Como N O Ser Atropelados Por Carros
Ny fizotran"ny fampidirana ireo fomba ireo amin"ny lahatsoratra amin"ny satan"ny WhatsApp encontro mitovy amin"ilay ampiasainao hanaovana an"io amin"ny resakao.